Ski Goggles Chọpụta mgbe na ihe kpatara ị ga-eji ha! - ULLER
← Nke gara aga
MGBE M KWES MYR MY MY SKI GOGGLES MGBE Ọ B ?R??
Ọ bụrụ na ị na-ajụ onwe gị ajụjụ a azịza ya bụ EE! Obi abụọ adịghị ya, ịgba ski aghọwo otu okwu maka agụụ, adrenaline na ọchị.
El skai A na-ahụta ya dị ka egwuregwu egwuregwu siri ike na nke na-atọ ụtọ niile, n'ihi na ọ nwere ụdị dịgasị iche iche dị iche iche, jumps, pirouettes na aghụghọ ndị dị jụụ, na-ahapụ ihe karịrị otu ogbi. Ma, dị ka egwuregwu egwuregwu niile, ịkwesịrị iburu akụrụngwa niile dị mkpa ... you maraworị ihe mere ị ga - eji were eji enyoanya echebe mgbe ị na-eme egwuregwu a?
Weta akụrụngwa zuru ezu maka egwuregwu nke skai na nke ọ bụla n'ime ọnọdụ ya dị oke mkpa iji mezuo ebumnobi anyị, gụnyere eji enyoanya. Ma ọ bụ na nchapụta ọkụ na mpaghara snowy dị oke elu, ọkachasị n'oge oyi, n'ihi na ọnọdụ nke anyanwụ na mbara igwe dị ala, na ụzarị anyanwụ na-ada site n'iche echiche, nke na-emerụ ahụ ike nke anya anyị. . Na mgbakwunye, mgbe anyị na-eme ihe, ichebe onwe anyị pụọ na ihu igwe na ifufe snow mgbe ị na-eme skiing dị mkpa iji hụ ọhụụ dị mma mgbe ị na-eme ski.
Kedu nke nkata SKI ka m kwesịrị ịhọrọ?
Tụlee nke gị iko nke skaiHa aghaghi ịgbaso ụkpụrụ ISO iji chebe gị nke ọma site na radieshon nke anyanwụ. Ekwesịrị ịnabata ha ma soro usoro nchekwa nke Europe. N'otu aka ahụ, ọ dị mkpa na ha ga-adaba nke ọma na ihu gị gụnyere mpaghara n'akụkụ. Cheta na iko nke skai Ọ bụghị naanị na ha ga-echebe anya gị pụọ na radieshon nke anyanwụ, ha ga-enyekwara gị aka ịrụ mgbe ị na-eme ski, n'ihi na ha ga-eme ka ahụ gị dị mma.
Buru nke a n'uche oge ọzọ ị họọrọ nke gị ihe ndozi skaiEziokwu bụ na ọ bụghị ha niile ga-aba otu ihe, ma pere mpe ma ọ bụrụ na ịzụta ha n'ụlọ ahịa na-akwadoghị ma ọ bụ n'ahịa n'okporo ámá. Ọ dịghị ihe ọ bụla! Nkwado bụ mgbe niile ịzụta ihe eji enyoanya na ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-enye gị nhọrọ na ụdị nwere ụkpụrụ kachasị mma, yana ihe kachasị mma na kristal.
Inwe ọhụhụ dị mma mgbe ị na-egwu egwuregwu na snow na-eme ka ngagharị na anya dị mma. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị họrọ nke eji enyoanya ndị ziri ezi nke dabara na mkpa gị.
Ga-ahọrọ mgbe niile eji enyoanya na teknụzụ dị elu nke na-eme ka arụmọrụ ka mma, mgbanwe na agagharị mgbe ị na-egwu ski na ọnọdụ kachasị njọ. Ọ kachasị mma itinye ego na mma ma a bịa iko nke skai, ma họrọ ngwaahịa nke ọkwa kachasị elu. Cheta na nke a apụtaghị ịzụta ihe nkpuchi dị oke ọnụ, mana ndị kachasị mma maka mkpa gị.
G CN C na-achịkwa nke SKI GOGGLES oghere dị?
E nwere ugbu a dị iche iche edemede nke iyo na anya m nke iko nke skai, site na CAT0 ka CAT4. Nọmba ndị dị na ngalaba nke ọ bụla na-egosi etu anya m dị n’ọchịchịrị na ọnụọgụ ọkụ ha n’enye. Buru n'uche na nke a dị iche na nsị radieshon, onye nchedo ya sitere na nchekwa UV400.
CAT0 bụ nke na-amịkarịkarịa ihe (ndị a bụ ihe doro anya), yana CAT4 bụ nke na-amakarị ihe kachasị (ị ga-ahụ na ha gbara ọchịchịrị). Ihe dị mma bụ na ọ bụrụ na ịnweghị ọnọdụ anya pụrụ iche, ndị ị ga-eji mee ihe kachasị bụ ụdị 1 na ụdị 3. na-eme skai ma ọ bụ snowboard.
Nkeji 0: Ha fọrọ nke nta transperent kristal na ìhè nnyefe nzacha si 80% na 100%. Ha nwere ike enweghị agba ma ọ bụ nwee agba dị nro. Egosiri ha maka omume skai n'abalị ma ọ bụ n'isi ụtụtụ tupu ọwụwa. Nakwa na igwe ojii ma ọ bụ site na ohere nke oke ikuku.
Nkeji 1: Ya ìhè nnyefe nzacha si 43% na 80%. Ha bụ anya m na agba dị nro, dị mma iji mee ihe mgbe ọkụ na-ebelata ma zere ahụ erughị ala site na mpụga mputa na mpụga n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla.
Nkeji 2: Ha bụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. Ya ìhè nnyefe nzacha si 18% na 43%. A na-egosi ha maka ụbọchị nke nchapụta ọkụ.
Nkeji 3: Ya ìhè nnyefe nzacha si 8% na 18%. Ha nwere agba gbara ọchịchịrị, zuru ezu iji nwee ahụ iru ala na anyanwụ, ọkachasị n'oge oge. Ha na-enye ọkwa dị mma maka ọchịchịrị n'èzí, ebe ọkụ na-agbanwe site na ọkara na ike.
Nkeji 4: Ya ìhè nnyefe nzacha si 3% na 8%. Ha bụ ndị kachasị ọchịchịrị nke ụdị niile na nzacha ọkụ ha sitere na 3% gaa 8% naanị. A na-eji ha na ọnọdụ ebe nchapụta bụ na anya CAT3 ezughi ezu maka skier ahụ.
NDPSMỌD FOR AKWOKWỌ CHhọrọ imirikiti ezigbo nsogbu SKI
Anya nchebe bụ dị mkpa maka onye ọ bụla ụgbọ mmiri. Cheta na gi ihe ndozi skai Ha kwesịrị ịnwe nchedo 99% ma ọ bụ 100% oge niile iji chebe gị pụọ na radieshon.
Gbaa mbọ hụ na ha nwere UV-400 nchedo,ebe ọ bụ na nza ya ga-echebe gị site na ụzarị UVA na UVB. Yabụ nke gị eji enyoanya ha ga-egbochi anyanwụ nke ikuku ultraviolet n'ụzọ ziri ezi, jiri ogologo nrugosi ya erughị 400 nanometers.
Purzụiko nke skai ya na iji anya ndọta anya. Ọ ga - enyere gị aka iji oghere zuru oke dịka ọnọdụ ihu igwe na ọkụ nke ị hụrụ onwe gị. Kedu? Nwere ike ịhọrọ ma gbanwee ụdị oghere dị na skins gị ka ọ na-adabara gị ozugbo.
Na-ahọrọ iko skai jiri “Antifog” ma ọ bụ “Antifog system”. Nke a ga - enyere gị aka izere ịdị na-eme ihe.
Họrọ iko si na skai ya na sistemụ ikuku ikuku. Naanị ihe nkpuchi nwere teknụzụ mgbochi na-eme ka ikuku na-aga n'ihu ma kwe nkwa ọhụhụ ka mma.
Purzụ iko nke skai nke dabara na ihu gị na ihu gị nke ọma. Ha ga-enwe eriri ịmịpu ihe iji dozie ha nke ọma n'isi gị na okpu agha gị.
Chọọ iko skai ọkụ. Ihe dịnụ bụ thermoplastic polyurethane, nke na-enye ogo kachasị mma na ọkụ.
Mụtakwuo banyere SKI na ụdị ya kachasị ewu ewu!
Ọ bụrụ na ị na-amalite ịgba ọsọ, ị nwere ike ịbụ ihe na-atụ ụjọ, yana ị ka na-ejikarị ije ije na agility na snow ma ọ bụ na-ebu ngwa niile n'aka. Jide n'aka na ugbu a ị nwere nkwanye ùgwù na ịkpachara anya iji bulie ọsọ ọsọ. Echegbula, omume na-eme ka zuru oke! Ọ bụ maka ịnwe ọtụtụ nraranye, ọnọdụ magburu onwe ya na ọtụtụ, ọtụtụ mmụọ nke njem. Ọ ga - abụ naanị oge tupu ọ bịa kpam kpam maka gị itinye skis gị, were gị eji enyoanya, ma jupụta gị na adrenaline mgbe ị na-egwu ski.
O doro anya na skaiỌ bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị sie ike na nke zuru oke, na nke a, ọ nwere ọtụtụ ụzọ isi na-eme ma na-anụ ụtọ ya. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ edemede na iche nke skai na-agbanwe site na mpaghara rue mpaghara, enwere ike ịsị na ụdịdị ski Ndị kacha ewu ewu bụ: ịgba mmiri n’elu mmiri, ịgba ọsọ obodo, ịgafe ebe ọzọ, ịgba ọsọ freeride, ịgba ọsọ ọsọ ọsọ na ịgafe freestyle. Gụọ ma mụtakwuo banyere ha!
Alpine Skiing nwere aha ya na Alps, mpaghara ebe ọ malitere ịmalite na mmalite. Ọ bụ otu n'ime ụdị egwuregwu kachasị ewu ewu na ewu ewu, n'ihi nke a ka amaara ya dịka "ịgba ọsọ". Ọ dabere na mgbada ya na skis na snow na-eso ụzọ ejiri akara mgbama na-acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara (ọnụ ụzọ ámá), na mgbago ugwu dị elu maka obere oge enwere ike.
Modalities nke Alpine Skiing
Jụrụ: ụbọchị atọ asọmpi, nke ikpeazụ ịbụ ule na breakneck gbapụrụ ọsọ.
Slalom ma ọ bụ Slalom: obere ụzọ na ọtụtụ ọnụ ụzọ ámá na-ekesa n'okporo ụzọ (n'etiti 55 na 75) na anya nke 75cm na 15m n'etiti ha. Ntugharị na egwu a siri ike ma na-agbagwoju anya; ọkacha mmasị ndị ọkachamara.
Nnukwu Slalom: Enwere okpukpu abụọ n'otu ụzọ; ọ na-achọ ka onye na-agba ụgbọ mmiri nwere ọtụtụ ahụmịhe na nkuku na nnukwu ọsọ. Ọnụ ọgụgụ kacha nta nke oge abụọ na ụmụ na-ekwupụta onye mmeri. Ọnọdụ a na-ebelata ohere dị n'etiti ọnụ ụzọ gị ma ọ dịkarịa ala 2m. Ọnọdụ a na-ebelata ọnụ ọgụgụ ọnụ ụzọ ámá ma e jiri ya tụnyere Slalom nkịtị.
Super Giant Slalom (Super G): Zọ a na-agba ọsọ ọsọ na mgbatị, ọ na-emekwa otu mkpụrụ. Onye ọ bụla jisiri ike mee ya n’oge dị mkpirikpi, ọ bụ ya meriri.
Ndekota: O mejuputara uzo abuo n’otu uzo di mkpirisi. Ejikọta skiing na-atọ ụtọ nke ukwuu n’ihi na onye mmeri bụ onye izizi gafere agba ọsọ.
Jikọtara: Ọ nwere akụkụ abụọ, otu maka slalom na nke ọzọ maka mgbada. Ọ chọrọ oke nkenke na ọsọ ọsọ karịa ndị ọzọ. N'okwu a, onye asọmpi nke gụrụ ọnụ ahịa kacha dị ala nke oge ya kachasị mma ga-emeri.
El ski ski ọ bụ eziokwu Kacha eme ihe skai modality O doro anya na ị malitere ma ọ bụ ga-amalite na egwuregwu a. Buru n'uche na ọ bụ usoro nke ị na-ekwesịghị ime ma ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo akụrụngwa na ezigbo eji enyoanya.
Ọ makwaara dị ka Nordic ski, cross-mba ski ma ọ bụ na-agba ọsọ ski. Ọ gụnyere njem dị ogologo na oke ọsọ n'oge kachasị dị mkpirikpi, na-enweghị isi, ala dị larịị ma ọ bụ nke nwere oke mkpọda. Ndị a bụ usoro nke ịgba ọsọ Nordic:
Ogwu Nordic Ski
Nordic Skating na-eme njem
Ski na-amali elu
-Gba ọsọ na-agwakọta skiing na ugwu ugwu, emeghị ya na mpaghara akara ma ọ bụ nke akwadobere. Ọnọdụ anụ ahụ magburu onwe ya dị mkpa maka omume ya, ma maka ịrịgo na ịrịgo ugwu ahụ. Na ọnọdụ a nke skaima nrigo na nrigo ka emere dika njem.
Freeride bụ ụdị nke skai ịrịba na-mere anya-piste, na e mere karịsịa maka agba nwere mmụọ nke nweere onwe ya. Ọ naghị agbaso ụzọ akọwapụtara, yabụ skier nweere onwe ya ịhọrọ ebe ịkwaga. Otu a na - eme ka ọ bụrụ ihe na - atọ ụtọ n'ihi na anyị na - eme ihe nke anyị, ebe anyị na - enwe ekele maka ọdịdị ala dị iche na nke pụrụ iche. A na-eme ya n'ugwu na-amaghị nwoke ebe enwere ntụ ntụ ntụ, nnukwu mkpọda na mgbochi ụwa, Ya mere, ọ gụnyere ụfọdụ ihe egwu na ọtụtụ adrenaline na arụ ọrụ ahụ. Freeride bụ modality nke emere maka ndị na-agba ọsọ nwere ọtụtụ ahụmịhe na egwuregwu ahụ.
UGOCHUKWU / FREESKI
Na-ewere otu n'ime ndị kasị dị ịrịba ama iche nke skaiSkiers na-eme ọtụtụ stunts, jumps, na pirouettes mgbe ị na-eme usoro a. Ebubere ya ka ọ bụrụ ụdị mkpori ndụ, mana ugbu a, ọ ghọla egwuregwu egwuregwu snow a ma ama. Gụnyere nnukwu jumps na mgbochi (olulu na mounds) maka ịrụ ọrụ nke stunts. Ọnọdụ nke freestyle ma ọ bụ freeski bụ:
Ski na ikuku
AKW SKKWỌ SKI / KILOMETER
Ọ na-agụnye ịgbadata mkpọda iji nweta ọsọ ọsọ kachasị ekwe omume na egwu 1km nke emepụtara maka egwuregwu. Ihe dị mma bụ na ndị na-agba ọsọ ọsọ gafere 200km / h ma na-etinye onwe ha na uwe ndị e ji polyurethane ma ọ bụ latex mee, ma na-eyi okpu aerodynamic, kpudo ma ọ bụ osisi nwere akara nke ọ dịkarịa ala 1m, na skis nke kachasị 2.4m ogologo site na 10cm n'obosara. El skai ọsọ bụ ụdị egwuregwu na ọ ghọrọ onye ama ama na 1930, na asọmpi emere na Saint-Moritz (Switzerland), ọ bụ ezie na ugbu a a naghị ele ya anya dị ka ịdọ aka ná ntị egwuregwu otu egwuregwu Olympic.
Ugbu a anyị matara ntakịrị ihe banyere ụdịdị ski y ihe ndị kasị mma skai ugogbe anya na ị nwere ike inweta egwuregwu a, ị na-abịarukwu nso ma na-aga ma na-ekpori ndụ emere na snow ka ị kwesịrị ya. Cheta na egwuregwu dị oke egwu chọrọ ọtụtụ nkwadebe nke anụ ahụ na nke uche, yana otu egwuregwu kachasị mma.
Mụọ ọtụtụ ma kwadebe nke ọma maka njem ahụ na ụfọdụ ihe ọma eji enyoanya na nke ọ bụla n'ime usoro ya!